Akụkọ - Njem ọhụrụ nke njikọta ụlọ ọrụ, ikwe aka na idebe isiakwụkwọ ọhụrụ
Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd., nke hiwere ọkwa ọhụrụ oge ọ bụla, ewebatala oge akụkọ ihe mere eme dị mkpa. N'April 12, 2021, Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. na Shenzhen Dental Craftsman's Home Technology Co., Ltd. na -edebanye aka na nkwekọrịta nkwekọrịta dị mkpa. A na -akọ na ndị otu abụọ ahụ enweela nkwekọrịta na imekọ ihe ọnụ na njikọ ụlọ ọrụ, ọzụzụ nka na nkwalite ndị ọrụ eze, mgbanwe teknụzụ na mmepe ụlọ ọrụ.
N'ime mmekọrịta a dị omimi, enwela mkparịta ụka miri emi na nkọwa mmejuputa iwu na mmepụta nke ihe mgbochi seramiiki zirconium, osisi nhazi ezé, ọzụzụ na mmụta nke teknụzụ, yana ngwaahịa ezé ahaziri dị ka mkpa ndị ahịa si dị. Ịgafe emewokwa ka nkwurịta okwu miri emi dị na njikọ niile, mee ka oge inweta ozi ụlọ ọrụ na mkpa ndị ahịa dị ngwa ngwa, ma mee ka ngwaahịa kwekọọ na mkpa onye ọrụ.
Bi Wenjuan, osote onye isi njikwa Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. webatara: njikọta kwụ ọtọ nke ụlọ ọrụ ahụ site na Yurucheng na Home Dentist, nha nke ihe eze, oke akụrụngwa nwere ezi uche, ịdị omimi nke ụlọ ọrụ, yana nkwalite asọmpi ụlọ ọrụ Ndị agha niile nwere mmetụta dị mma. Ọ dị oke mkpa na mwebata na ntinye nke ụlọ ọrụ mgbago elu na mgbada nke oghere ọnụ dị ka mmepụta ihe ezé, osisi nhazi ezé, ụlọ ọgwụ eze, wdg. mkpa nke ndị ahịa ikpeazụ, mebie ihe mgbochi ụlọ ọrụ, na ahụmịhe ụlọ ọrụ mgbanwe. Ọ dịghị, iji jeere ndị ọrụ njedebe ozi ka mma.
Liu Jianjun, Onye isi oche nke Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. kwuru, sị: Site na mmụba nke mmata ọnụ ọha na ọchịchọ nke iwu obodo ka ndị dọkịta na -agba onwe ha, ụlọ ọrụ eze ewepụtala ohere dị ukwuu maka mmepe. N'okpuru ọnọdụ ọrịa ugbu a, “ihe egwu” na “ohere” na -ebikọ ọnụ. Ka anyị na -ahụ mmetụta ọrịa na -efe efe na ụlọ ọrụ ọnụ, ọ dị anyị mkpa ichebara echiche nke ọma maka usoro mmepe ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ọnụ, na -elekwasị anya ugbu a na ịtọ ọdịnihu. “Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ eze arụpụtala agbụ ígwè ọrụ zuru oke, nke chọrọ ka anyị banye n'ọsọ asọmpi na njikọta dị mma ka anyị na -etolite n'ike dị elu. Naanị site na njikwa ahaziri nke ọma ka enwere ike nweta ogologo oge na ezigbo mmepe nke ụlọ ọrụ.